SomaliTalk.com » Mudnaanta Hawlaha Horyaalla Madaxweynaha la Doortay
Maxaa la gudboon 100-ka maalmood ee ugu horeysa Xafiiska
Guushii Madaxweynaha la doortay Farmaajo, Feb 8, 2017
Waa maalintii ay xubnaha labada golle ee BF Soomaaliya ay ficil u badalleen dareenkii shacbiga ay matallaan islamarkaana ay doorteen Maxamed Cabdulaahi Farmaajo inuu noqdo madaxweynaha 9-aad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. Haddaba, anigoo ka duullaya dareenka farxadeed ee ay arintan keentay, welina ka walaacsan dhibaatooyinka iyo hagardaamooyinka nagu xeeran ayaan eegayaa dhawr arimood oo aan isleeyahay waa muhiim in madaxweynuhu uu mudnaan dheeriya siiyaa 100-ka maalmood ee ugu horeysa hoggaamintiisa qaranka.
Ugu horeyn madaxweynaha la doortay Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo ah shakhsi aan ku aqaano Alla ka cabsi iyo Soomaali jaceyl waa mudane aan aniga iyo in badan oo kamid ah shacbiga Soomaaliyeed aan baranay markii uu ahaa Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, gaar ahaana dowladii madaxweyne Shariif Sheekh Axmed, wakhtigaas oo aan aragnay dareenkiisa wadaniyadeed, waxqabadkiisii mudadii koobnayd ee uu xafiiska joogay iyo sidoo kale siduu u kasbaday quluubta shacbiga Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibedda. Taariikhdaas wanaagsan ee aan ku barangay, waa tan maanta sahashay in Gollaha Shacabku ay fuliyaan wixii dad badan oo kamid ah ummadda Soomalaiyeed niyadooda ka guuxeysay tan iyo 2011-kii.
Mudane Madaxweyne, tilmaantaas wanaagsan ee aynu kugu aragnay sanadka ka yareyd, waa tan xaqiiqdii maanta sahashay inaad noqoto siyaasigii ugu shacbiyadda badan taariikhda casriga ah ee dowladnimada Soomaaliya, sidaa daraadeed, waxaan ilaahay SWT kuu weydiinayaa in uu kugu guuleeyo oo uu kugu asturo xilkaas lagugu aaminay. Waxaan Eebahay ka rajeynayaa in sida uu kulmiyay taageerada ay kuu hayaan shacbiga Soomaaliyeed, in sidoo kalena uu kuugu dumo in si aanan kala har lahayn laguula shaqeeyo oo laguu garab istaago.
Mudane, waxaa si weyn u muuqata in hoggaamintu aysan ahayn booska aad fadhido ama xilka aad heyso, balse ay tahay hadba inta ay gaarsiisan tahay saameynta aad dadka ku leedahay ama aad ku reebto inta aad masuulka tahay sida uu buuggiisa hoggaaminta wanaagsan ku xardhay qoraaga caanka ah ee John Maxwell. Waana taas arinta kuu caddeynaysa in saameynta haatan lagaa sugayo ay in badan ka badan tahay tii aad nagu reebtay markii aad ahayd Ra’iisul Wasaaraha Dalka.
Dhabtii Madaxweyne, wey muuqata iney ku horyaallaan hawlo farobadan kuwaasoo u baahan in loo fuliyo si taxadar badan si loo gaaro halku-dhiggii ololiha doorashada ee “Nabad & Nolol”. Waan hubaa inaad Mudane garawsan tahay xajmiga ay leeyihiin hawalahaas, hase ahaatee tan aadka uga sii muhiimsan ayaa ah mudnaanta ay arimahaas kala leeyihiin, waxaana tilaabooyinkan aad qaadeyso ay saldhig weyn u noqon doonaan fulinta balamihii aad qaaday wakhtiga doorsahada, xoojinta dareenka shacbiga tabaaleysan ee kusoo eegaya iyo sidoo kale ka lib-gaaridda in badan oo kamid ah hawlaha ku sugaya 1460-ka maalmood ee xilka laguu doortay.
Kullankii beesha caalamka iyo madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya, 2017
Mid kamida ah tilaabooyinka aasaasiga ah ee aad qaadeyso ayaa ah qaabka aad ula fal-galeyso ama aad u wajihi doonto xiriirka beesha caalamka oo ay ugu horeeyaan dalalka deriska, gaar ahaan dowladda Itoobiya oo ismaandhaaf xooggan oo taariikhiya uu kala dhaxeeyo Dalka.
Xafiiska Midawga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, kan Qaramada Midoobay, Midawga Yurub, Mareykanka, Turkiga, Carabta iyo guud ahaanba dalalka iyo ururada caalamka ee sheegta iney daneeyaan arimaha Soomaaliya ayaa u baahan in loo wajaho deganaan, feejigaan iyo siyaasad hadafkeedu yahay danaha Qaranka Soomaaliyeed.
Mudane Madaxweyne, waxaa hubaal ah iney jiraan dano muuqda iyo kuwa daahsoon oo ay dalalka shisheeye iyo beesha caalamkuba ay ka leeyihiin Soomaaliya, haddana waxaan aaminsanahay in madaxtooyada iyo dowladaadaba aad si weyn uga fiirsataan, ugana taxadartaan tilaabo kasta oo dhankooda loo qaadayo, sidoo kale waa muhiim in madaxda qaranku ay hoosta ka xariiqaan in taageeradooda wanaagsan ay muhiim u tahay dhismaha qaranimadeena, balse khatar walba oo dhankooda nooga timaada iney toban jibaar ka badan tahay taageerada ay sheegtaan iney nala garab taagan yihiin.
“Waxaan filayaa in madaxtooyada iyo xukuumadaaduba ay ka fogaato qiiro iyo sal-fudeyd na jeclaysiin kara cadaw nala jooga, iyo is adkeyn iyo jikaar siyaasiya oo ka careysiin kara saaxiib wanaagsan oo waxtar nala doonayay.”
Mudane, Soomaaliya oo aanan ka tageynin dadnimadeena, maslaxadeeda ummadeed iyo teeda qaranimo islamarkaana ka feejigan khatar walba oo dhankooda ka imaan karta, waa in beesha caalamka aan kula macaamilnaa siyaasad dabacsan oo waxtar u leh waxaan dooneyno in maanta nalagu caawiyo. Sidaa daraadeed waa muhiim inaan dhageysano tallo soo jeedintooda joogtada ah balse muhiim maahan fulinta wax walba oo ay nagula taliyaan.
Waxaa hubaal ah in adiga iyo inta caqliga u saaxiibka ah ay ka dheregsan yihiin inaan nahay dal burburay oo in ka badan 30 sano ay wax badan ka xumaanayeen, haddaba anagoo og in ciidanka na ilaaliya ay ajnebi yihiin, cidda mushaarkooda bixisana ay ajnebi tahay, dalalka dersikuna ay qeyb lixaad leh ka yihiin ciidaankaas, waxaa waajib madaxda dalkeena ku ah inaad aad uga taxadartaan xiriirka aan la leenahay dalalka deriska iyo kuwa kale ee Afrikaanka ah ee ciidamadaas ka yimaadeen iyo beesha caalamka idinkoo mar walba xasuusan oraahdii ahayd”SIDEE XEEGO LOO XAGTAA ILKANA KU NABAD GALAAN”.
Mudane Madaxweyne, waa muhiim inaan ka shaqeyno hagaajinta dalkeena anagoo iska ilaalinayna kana taxadarayna khatarta inooga imaan karta beesha caalamka kuwooda aanan jeclayn jiritaankeena ee uu wakhtigu isu kaaya keenay ama uu ilaahay isku gobolka nagu abuuray, sidaas daraadeed mudane Madaxweyne kaliya muhiim maahan inaan ka fiirsano tilaabo kasta oo aynu qaadeyno, balse waxaa sidoo kale muhiim ah inaan ku baraarugsanahay halka aynu dhigeyno tilaabooyinka is-xigxiga ee aynu qaadeyno iyo waxa aynu ka dhaxi karno tilaabooyinkaas dal ahaan iyo ummad ahaanba. Waana lama huraan in mar walba madaxtooyada dalka laga xasuusnaado in Madaxweynaha dalka uu yahay astaanta midnimada qaranka; Ilaaliyaha iyo horumariyaha mabaadi’da aasaasiga ee Dastuurka iyo hufnaanta Soomaaliya.
Mudane, xaqiiqdii fahamka, la socoshada iyo qiimeynta siyaasadda dowladda Itoobiya ee ku aaddan dalka hooyo waa arin aad muhiim u ah oo inta badan madaxda dalkeenu aysan ku baraarugsaneyn iyagoo taas baddalkeeda wakhti ku bixiya marxabeyn, jaceyl xad-dhaaf ah iyo raali-gelin jaanteedu rogan tahay oo aanan ka turjumeynin danaha aasaasiga ah ee Diinteena, Dalkeena, iyo Dadkeena. Haddaba, mudane Madaxweyne adiga iyo dowladaadaba waxaa la idiinka fadhiyaa inaad siisaan feejignaan gaar ah qaabka aad ula fal-galaysaan xukuumadda Addis Ababa.
“Inta badan Itoobiya waa laga hor-istaagi karaa in faro-gelin toos ah ay ku yeellato doorashada hoggaanka qaranka, sida haatanba dhacday ee lagugu doortay, balse wey dhacdaa iney burburiso waxa aanu si madaxbanaan ku dhisanay ayadoo ka faa’iideysanaysa habac-sanaanta qarankeena iyo xiriirka ay la leedahay siyaasiyiinta Soomaalida iyo hoggaanka maamul goboleedyada dalka ka dhisan”
Mudane, waxay ila tahay iney muhiim tahay inaad xasuusataan in Itoobiya aysan in badan raali ka ahayn dhismaha qaran Soomaaliyeed oo xooggan sidaas daraadeed ay ku dadaasho bur-burinta iyo weecinta waxa dad Soomaaliyeed soo dhisteen ayadoo sidoo kale ka faa’iideysanaysa xadka dheer ee aynu wadaagno, xarunta midawga Afrika ee Addis Ababa, doorkeeda urur goboleedka IGAD iyo sidoo kale iyada oo ay ciidankeedu qeyb ka yihiin hawl-galka AMISOM ee midawga Afrika.
Mudane Madaxweyne, inta badan hoggaamiyayaasha Soomaalida waxaa dhaqan ahaan lagu yaqaanay in safarkooda ugu horeeya ee doorashada kadib ay ku aadaan magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya oo iyadu ah meel laga hago siyaasadda geeska Afrika, islamarkaana xarun u ah ururka midawga Afrika oo ay ku mideysan yihiin 55 wadan oo Afrikaan ah. Inkastooaan aaminsanahay inaanan marar badan laga fursan karin ka qeyb-galka shirarka dalalka Afrika ama kan maamul goboleedka IGAD balse haddana waxaa hubaal ah in yareynta safarada aad ku aadayso Itoobiya ay kordhin karto caafimaad qabka qaranimada iyo dareenka shacbiga Soomaaliyeed isla markaana yareyn karto faro-gelin ay Itoobiya dowladaada ku sameyso.
Mudane, madaama aad tahay hoggaamiyihii ugu shacbiyadda badnaa taarikhda Soomaaliya inta la xasuusto, bal kawaran in safaarkaaga ugu horeeya ee aad Muqdisho uga baxdo aad ku tago Hargeysa, caasimadda Somaliland, maxaadse u malayn lahayd iney ka tari lahayd arintan kordhinta dareenka umadda Soomaaliyeed? Waa hubaal in shacbiyadda aysumadda Soomaaliyeed haatan ku hayso ay sare u kici lahayd islamarkaana si weyn isugu soo dhawaan lahaayeen quluubta ummadda Soomaaliyeed meel walba oo ay caalamka ka joogaan.
Waan ogahay in siyaasad ahaan ay aad u adag tahay inaad maanta Hargeysa booqato adigoo ay kusoo doorteen xubno Baarlamaan oo ay kamid yihiin siyaasiyiin kasoo jeeda gobolada Waqooyi oo aanan Hargeysa tegi Karin ama sidoo kale ay aad u dhib badan tahay inaad booqato Hargeysa oo uu ka lusho calan aan ahayn kan Soomaaliya, balse waan aaminsanahay inaad booqan karto soona salaami karto, lana soo tashan karto maadaama ay yihiin dad Soomaaliya haatana lagu jiro hambal-yeynta iyo soo dhaweynta is-baddelka ka dhacay Soomaaliya. Waxaan aaminsanahay in arintan qalbi ahaan ay xoojin lahayd quluubta shacbiga Soomaaliyeed ayna rucub iyo cabsi weyn gelin lahayd inta neceb jiritaanka iyo midnimada ummadnimada Soomaaliyeed. Waa muhiim sidoo idoo kale inaad booqato inta badan gobolada dalka sida Baydhabo, Beled-weyn, Boosaaso, Cadaado, Gaalkacyo, Garoowe, Dhuusamareeb, Jowhar, Kismaayo iyo Marka, tani waxay abuuri kartaa jawi aad ka bilaabi karto siyaasad ku dhisan is-afgarad taasoo yareyn karta kala furnaan iyo ismaandhaaf ku yimaada madaxtooyada iyo maamul goboleedyada dalka.
Shacabka gudaha oo muujiyay dareenkooda ku aaddan doorashadha madaxweyne Farmaajo
“Dowlad aan xiriir la lahayn shacbigeeda, waxay lamid tahay caruur aanan xiriir la lahayn waaridkood” ee Mudane, si loo ilaalsho dareenka ay kuu hayaan shacbiga Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda oo xaqiiqdii iyagu ah cidda ku dooratay, islamarkaana ay dowladaadu la socoto, dhageysato, islamarkaana fahamto rabitaanka dadweynaha uuna jiro xiriir ka dhaxeeya shacabka iyo madaxtooyada waa muhiim in tilaabooyinka ugu horeeya ee aad hirgeliso uu kamid noqdo furitaanka iyo hawl-gelinta xafiiska xiriirka dadweynaha ee madaxtooyada. Waxa uu xafiiskan noqonayaa mid lagu soo gudbiyo dareenka dadweynaha islamarkaana saldhig u noqda hawl-maalmeedka joogtada ah ee madaxtooyada si loo raali-geliyo, loona ilaaliyo quluubta shacbiga Soomaaliyeed ee dhibaatadu ay soo daashatay.
Sidoo kale waxaa muhiim ah in xafiiskan uu si joogta ah ula socdo dareenka ay muujiyeen walaalaha Soomaaliyeed ee ku nool waqooyiga gaar ahaana gobolada Awdal, Sanaag, Sool, Togdheer iyo Waqooyi Galbeed maadaama ay si weyn oo ana cabsi ku jirin ay u soo bandhigeen wadaniyadda iyo Soomaalinimada quluubtooda ceegaagta. Waxaa sidoo kale xafiiskan toos ugu xirnaanaya dhamaan ururada bulshada oo ay ugu horeeyaan ardayda, culimada, ganacsatada, haweenka, macalimiinta, xirfadlayaasha, saxaafadda iyo bulshada kuwooda nugul sida naafada, agoonta, barakacayaasha, iyo dadka kuwooda aanan fursadda u helin in la maqlo dareenkooda.
Arinta ugu muhiimsan ee xafiiska xiriirka dadweynaha ayaa ah inuu ficil u badallo dareenka xaqiiqiga ah ee maanta ka dhex jira ummada Soomaaliyeed oo ah in laga shaqeeyo sidii loo heli lahaa taageero dhaqaale oo ka timaada shacabka taasoo lagu bixiyo danaha qaranka gaar ahaan taageeridda dadka ay abaaruhu aafeeyeen, bixinta mushaarka ciidanka iyo sidoo kale maareynta waxyaabaha aasaasiga ah ee jiritaanka dowladnimada Soomaliya.
“Dowlad aan ciidan lahayn waxay lamid tahay gaari aan darawal iyo lugo iyo lahayn, halka ciidan aan anshax iyo mushaar haysan aysan waxba ku duwaneyn maleeshiyo beeleed ku shaqeeya rabitaankooda shakhsiga ah” Haddaba, waa muhiin inaan ogaaano in ciidan Soomaaliyeed oo mushahaarkooda iyo tababarkoodaba loo joogteeyo uusan kaliya muhiim u ahayn ilaalinta amniga xarumaha dowladda, balse uu sidoo kale muhiim u yahay iney kala ilaaliyaan shacbiga Soomaaliyeed, islamarkaana ka hortagaan cadaw kasta oo ka yimaada dalka gudihiisa iyo dibadiisa.
Mudane madaxweyne, dhabtii waa fursad dahabiya oo u baahan in dalka & dadkaba looga faa’iideeyo kumanaanka Soomaalida ah ee caalamka ku kala baahsan kuwaasoo maanta diyaar u ah iney bixiyaan khidmad joogta ah oo ay ku garab istaagaan qaranimada iyo jiritaanka Soomaaliya. Waxaan hubaal ah in maanta ay muhiim tahay yagleelidda hay’ad gaar ah oo haatan fursadda xiriirkaas sii abuurta, mustaqbalkana si toos ah ula shaqeysa wasaaradaha Arimaha Dibadda, tan Maaliyadda iyo Gaashaandhiga si loo abuuro qaabka ay lacagtaas usoo xaroon lahayd, una gaari lahayd meelaha sida rasmiga ah loogu tallo galay oo ay ugu horeyso bixinta mushaarka laamaha ammaanka oo ay ugu horeeyaan booliiska iyo nabad sugidda.
Waa muhiim hirgelinta hanaan muuqda oo hufan kaasoo xaqiijin kara maareynta iyo maamulka dakhligan ka imaanaya shacabka Soomaaliyeed, kuna baxaya isla rabitaanka shacabka. Tusaale, haddii la helo nus malyuun Soomaaliya oo bil walba bixisa 320,000 shilin Soomaali ah, dowladda waxaa soo galaya dakhli gaaraya 160 bilyan oo shilin Soomaali ah, taasoo u dhiganta qiyaastii 10 milyan oo doolar oo dowladda u sahli karta ugu yaraan bixinta mushaarka ciidanka. Waxaase ka sii fiican haddii la helo hal milyan oo Soomaaliya oo isugu jira ganacsato iyo xirfadlayaal bil walba awoodi kara baxinta $50 taasoo keeni karta in dowladdu ay hesho dakhli gaaraya $50 milyan, waxayna arintani sare u qaadaysaa xoojinta amniga, bixinta mushaarka ciidanka iyo sidoo kale soo nooleynta xoojinta agabka iyo tababarada ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
“Mid kamid ah caqabadaha ugu muhiimsan ee hor istaaga dowladnimada Soomaaliya isla markaana kaliya aanan abuurin ismaandhaaf iyo jahwareer siyaasadeed balse sidoo kale na dhaxal siiya qabyaalad siyaasadeysan iyo nacayb bulsho waa marka ay soo baxdo iney is khilaafeen Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha.”
Waxaan rumeysnahay inaaney arintani ahayn taariikh ugub ah oo wakhtigii burburka bilaabatay ee sidoo kale xaataa madaxweyne Allaha u naxariistee Aadan Cadde iyo Ra’iisul Wasaare Cabdirashiid C Sharmaarke ayaa la tilmaamaa iney isku maandhaafeen hoggaanka iyo hawlaha xukuumadda Soomaaliya.
Mudane Madaxweyne, sida uu kuu ogollaanayo qodobka 90-aad ee dastuurka federaalka Soomaaliya ee qeexaya awoodaha madaxweynaha, magacaabista Wasiirka Koowaad, xilka qaadistiisa iyo kala diridda Xukuumadda Federaalka marka ay waydo codka kalsoonida gollaha shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya waa awood adiga kuu gaar ah oo uu kuu ogollaanayo Dastuurka qaranka.
“Waa muhiim inaad mar walba xasuusnaato fursadda aad heysato inta aadan soo magacaabin Wasiirka Koowaad ayaa wax weyn ka badan tan aad heli karto marka aad isku-maandhaaftaan fulinta hawlaha aasaasiga ah ee xukuumadda looga fadhiyo”
Madaxweyne, waxaan si weyn kaaga codsanaynaa inaad si taxadar leh uga fikirto, la tashi xooggan ka sameyso, iskuna day inaad Ra’iisul Wasaaraha kusoo xulato waddo ka barax tiran, kana duwan tii ay horey ugu soo hungoobeen madaxdii adiga kaa horeysay eek u fashilmay magacaabsita shakhsi ay wada shaqeyn karaan.
Mudane madaxweyne, Ilaahay haku waafajiyo inaad mar walba xasuusnaato in waxa ugu badan ee ay madaxweynaha iyo Ra’iisul wasaaruhu isku qabtaan ay tahay magacabista gollaha wasiirada taasoo aan ogahay inaad khibrad fiican u leedahay maadaama aad xilkaas soo qabatay, waxaan ku kalsoonahay inaadan ruux aadan aqoon badan u lahayn oo aanan ahayn wadani, Soomaalinimadu ku weyn tahay oo xal-xalan aadan xilkan si deg-deg ah ugu magacaabin kadibna isqabashadiinu ay soo deg-degto.
Waa muhiim in Ra’iisul Wasaaruhu noqdo ruux fasiri kara xiriirka taariikhiga ah ee la wadaagno ummadaha ku nool dalalkaas ee aynu wadaagno dhaqanka, diinta, iyo astaamo faro badan oo lagu dhisi karo siyaasad saldhigeedu yahay fur-furnaan, dabacsanaan iyo iibinta danaha aasaasiga ah ee qaranimadeena. Dabcan, waan hubaa iney dhamaan arimahani horseedi karaan helitaanka fursado dhaqaalle, kuwo maal-gashi iyo kuwo sahli kara in dowladda Soomaaliya ay si fudud ku hesho barnaamijyo lagu horumarinayo hay’adaha dowladda iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dhamaan gobolada Dalka.
Mudane Madaxweyne, waa muhiim inaad si qoto dheer aad niyadda ugu hayso in xiriirka maamul goboleedyada iyo madaxdoodaba uu Soomaaliyada casriga ah u yahay mid qiimo faro badan haatan ugu fadhiya. Maadaama xubnaha Gollaha Shacabku ee kusoo doortay dhamaantood laga soo doortay gobolada Dalka, sidoo kalena dowlada dhexe aanay saameyn xooggan ku lahayn inta badan 18-ka gobol ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
“Waa muhiim inaad si weyn niyadda ugu haysaa in qaar badan oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaalida gaar ahaan madaxda maamul goboleedyada ay xiriir wanaagsan oo ay la yeeshaan madaxweynaha iyo dowladda dhexe ay uga sahlan tahay iney deg-deg ula xirtaan Itoobiya isla markaana ku shaqeeyaan rabitaanka xukuumadda Addis Ababa.”
Tallo ahaan dhabtii wey fiicnaan lahayd hadii la heli karo guddi kooban oo isugu jira xildhibaano iyo golle wasiiro oo ah dadka gobolada u matella dowladda kuwaasoo idinka xigsada maamul goboleedyada si ay dowladaadu uga hortagto khatar walba iyo kala furnaan kasta oo ku imaan karta xiriirka ay dowladda dhexe la leedahay maamul goboleedyada.
Waxaan filayaa in talaabadan ay wax tari karto maslaxada guud ee qaranka, isla markaana aanan madaxda dalka laga hor istaagin fulinta waajibaadka shaqo ee loo igmaday.
Dhinaca kale qaabka loo wajahayo walaalaha waqooyi ee la baxay Somaliland waa arin aad muhiim u ah, balse waxaan arintaas ka hadli doonaa marka aan go’aansado inaan qoro qormada aan ugu tallo-galay waxa “Waxa la gudboon xukuumadda JF Soomaaliya” Mudane, dhabtii waxaan rumeysnahay in walaalaha waqooyi oo lala hadlo ay tahay waajib qaranimo oo la idiinka fadhiyo balse si wada hadalkaas u guuleysto waa in koonfurta Soomaaliya laga hirgeliyo dhaqan dowladnimo oo saldhigiisu yahay dib-u-heshiisiin, hub-ka-dhigis si loo gaaro amni iyo xasillooni siyaasadeed oo horseedda hanaan dowladeed oo hal jiho u socda.
jiritaanka Soomaaliya oo iyagu soo hindisa kooxo abaabulan oo isku xeera madaxda dalka kuwaasi oo sawir fool-xun u gudbiya shacbiga islamarkaana keena jahwareer siyaasadeed iyo rajo-burbur ku timaadda dareenka shacabka.
Mudane, waan ku kalsoonahay inaad xasuusnaato waxa dhaqanka kooxeysiga iyo isku meeritaanka shakkhsiyaad gaar ah oo aanan sumcad wanaagsan lahayn ay ku keeni karto dareenka wadaniyadeed ee lagugu doortay. Waa muhiim hirgelinta xafiis la socda anshaxa shaqaalaha madaxtooyada iyo dadka kaa agdhaw oo ay hormuud ka yihiin dad aqoon iyo khibrad u leh si loo hubiyo hufnaanta hawlaha shaqo ee madaxtooyada ka socda iyo qaabka ay shacbiga Soomalaiyeed ee gudaha iyo dibadda ay uga fal-celinayaan ama ay ugu yaraan u dareemayaan. Xafiiska lagu dhawrayo Anashaxa shaqaalaha madaxtooyada waxa uu madaxweynaha iyo agaasimaha guudba u sahlayaa ilaalinta meeqaamka iyo hawlaha madaxtooyada qaranka.
Gebagebadii, Mudane Madaxweyne, ma filayo in ruux walba oo qeyb ka ahaa ololihii doorashada iyo isbadalkii ka dhacay dalka uu kamid noqon karo shaqaalaha madaxtooyada ee kaa agdhaw, haddaan si kale u dhigo ma filayo in boqolaalkii ruux ee Soomaalida ahayd ee kaala shaqeey ololihii “Nabad & Nolol” in dhamaantood ay kula shaqeyn karaan ama ay boosas joogta ah ka helayaan madaxtooyada, balse waxaa muhiim ah inaad heshid xirfadlayaal ay shaqadoodu qeexan tahay oo fulin kara waajibaadka shaqo eek u horyaalla, kuuna sahli kara gaaritaanka hadafkaan kugu dooranay ee ahaa ilaalinta danta Dalka iyo Dadka.
Ilaahay waxaan kuu weydiinayaa in xilkaas uu kugu guulleeyo, maalmaha ka harsan xukunkaagana ayNA noqdaan kuwo noo horseeda baraare, farxad, samir iyo isu naxariisasho ku saleysan islaanimo, Soomaalinimo ku dhex baahda shacbiga Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda.